General – Lwin Htut Kyaw
Dalai Lama (ဒလိုင်းလားမား)
ဒလိုင်းလားမားဆိုတာနဲ. လူတိုင်းပြေးမြင်တတ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး တပါးပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ၁၄ဆက်မြောက် his holiness “Tenzin Gyatso” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Wiki ဒလိုင်းလားမားဆိုတာနဲ. လူတိုင်းပြေးမြင်တတ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး တပါးပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ၁၄ဆက်မြောက် his holiness…
တစ်ခါက.. ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ တပည့်တစ်ယောက်နဲ့အတူ ခရီးကြမ်းတစ်ခုကို ထွက်ခွာခဲ့ပါသတဲ့..။ အဲဒီလို ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာ ခြေကျင်ခရီးထွက်လာရင်းမှာပဲ ညဉ့်အမှောင်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ဝင်ရောက်လာပါသတဲ့..။ ညရဲ့အမှောင်ထုဟာ ပိုမိုပြီးကြီးစိုးလာပြန်တာကြောင့် ဆရာက တပည့်ကိုဒီလိုပြောတယ် “တပည့် ငါတို့တည်းခိုဖို့နေရာလေးဘာလေးရှာမှာဖြစ်မယ်၊ ဒီအတိုင်းအိပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။ ဟိုဟိုဒီဒီသွားပြီး…
Posted in: Knowledge Filed under: General
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ ညီလာခံအစည်းအဝေးကြီးက လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကြီးကို အတည်ပြု၍ ကြေညာလိုက်ရာ ထိုကြေညာစာတမ်းကြီး၏ စာသားသည် နောက်စာမျက်နှာများတွင် အပြည့်အစုံပါရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ရာဇဝင်တွင်မည့် ကြေညာချက်ကို ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဤညီလာခံ အစည်းအဝေးကြီးက…
Dibbuk box ကဝိုင်ထည့်တဲ့သေတ္တာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂျုးလူမျိုးတွေရဲ့လူထုပုံပြင်အရ စိတ်ကစဉ်ကလျားဖြစ်တက်ခြင်း၊သရဲခြောက်ခံရခြင်း၊သရဲဝင်စီးခြင်းကိုပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနဲ့အတူ eBay တွင်ရောင်းချရင်းနာမည်ကြီးလာပါတယ်။၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာရှေးဟောင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူပြုပြင်သူတယောက်ကနေPortland,Origon မှာဇာတ်လမ်းအစပြုခဲ့တယ်။အသက် ၁၀၃ နှစ်ရှိတဲ့အဖွားအိုတစ်ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သူ့မြေးမကလေလံတင်ရောင်းချရင်းသေတ္တာဝယ်ယူတဲ့သူ့ကိုသတိပြုမိပြီးသူ့အဖွားရဲ့အတိတ်ကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဖွားအိုဟာ ဂျူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီး World ward ll အချိန်တုန်းကနာဇီအကျဉ်းစခန်းကနေအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူမမိသားစုထဲကတစ်ဦးတည်းသောသူဖြစ်ပါတယ်။သူမအမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အချိန်မှာ ဝိုင်သေတ္တာနဲ့အခြားပစ္စည်း(၂)မျိုးသာသူမယူသွားခဲ့တယ်။…
တစ်ခါတုန်းက Company အကြီးကြီးတစ်ခုမှာ Sales (အရောင်းဝန်ထမ်း) ရာထူးအတွက် အလုပ်လျှောက်တဲ့ ဝန်ထမ်း(၃)ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့၃ယောက်လုံးဟာ ရာထူး နေရာအတွက် သင့်တော်သူတွေမို့ အင်တာဗျူးမေးတဲ့ သူက ခေါင်းခဲလာပါတယ်။ နောက်တော့ အကြံရပြီး သူတို့သုံးယောက်လုံးကို အလုပ်တစ်ခု စေခိုင်းခဲ့ပါ…
[ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့။ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့။ ၃။…